China Calender Heat Press Machine fekitari uye bhizimisi | Asiaprint
Otomatiki Karenda Sublimation Heat Kutamisa Muchina Wokudhinda Muchina wakakodzera kuchinjisa pateni kune machira kubva kune sublimation kuchinjisa bepa. Inoshandiswa zvakanyanya kuburitsa T-shati, machira edhayi, mureza, mureza nezvimwe zvese mhando yezvinhu zvemachira zvinoda dhayi.
1.Kushandisa Kwakakura: Inoshanda kune ese ari maviri kupisa kudhinda yekudhinda uye yekotoni inotonhora kudhinda yekudhinda.
2. Mhedzisiro yekudhinda mhedzisiro: Iyo yekuchinjisa yekudhinda mhedzisiro yakanakira seiya yemafurati anopisa kupisa stamping michina.
3. Yakakwira Hardware Kugadziridza: Iyo huru yemadziro bhodhi uye ese shaft rollers ese akasimbiswa uye nehunyanzvi akagadzirwa.
4. Pneumatic kumanikidza, kumanikidza kunogona kuchinjika kudzora.
5.Dzidziso inonzwisisika: Iyo yakasanganiswa inogadzira yekudyisa uye yekubuda kunze system, iyo yakafanana uye yakarurama kufamba kwepepa uye jira, muchina unotora nzvimbo shoma, inochengetedza vashandi.
6. Mucheka / Yekutamisa Pepa / Tissue Pepa Kukakavara Kunodzorwa neMhepo Yakadzvanywa.
7.Kudzvinyirira uye kupisa kwakawanda kunogona kuendesa akasiyana mapatani
8. Yakashongedzerwa neyakagadziriswa pneumatic kumanikidza system, gadzirisa kumanikidza zvinoenderana zvakasiyana.
Muchina HERE. JC-26B
Kuchenesa ndiro saizi (CM) 120 * 21
Kushandisa Pepa Printer, Label Printer, Kadhi Printer, Jira Printer, Garment Printer
Rudzi rwekupisa Roller kupisa kupisa muchina
zvakabuda zvakarongwa 9KW
Nguva Range (S) 0-999
uremu (KG) 1000KG
Kurongedza Saizi (CM) 204 * 114 * 155
Chitupa CE / SGS
Garandi: Iyo garandi nguva ndeye gore rimwe. Kurumidza-kupfeka chikamu hachina kubviswa. Kana zuva rewarandi rapera, sevhisi yekuchengetedza yehupenyu inopihwa.
Chinhu chekubhadhara: Isu tinogamuchira 30% T / T seasipo uye 70% T / T mwero usati watumirwa. T / T, Western Union, Alibaba Trade Assurance kubhadhara. Kune iwo maodha ari pasi pe1000USD, tinogamuchira PayPal kubhadhara.
Chitupa cheEC: Kune ese zvigadzirwa tine CE chitupa.
Kuisirwa: Isu tinotumira injinjiniya installatoin ye otomatiki oval muchina, mimwe modhi michina isu tinotumira yekumisikidza vhidhiyo uye gwaro regwara.
Tine nyanzvi mushure mekutengesa timu iyo inogona kupa vhidhiyo tutorials yekuunganidza michina uye kugadzirisa michina matambudziko pamhepo maawa makumi maviri nemana.
Yakakwira yekugadzira inokwana uye ipfupi dhirivhari time.Compare nenguva yekuendesa ye roller kupisa muchina muchina, wezera rako anoda anopfuura 20days, uye isu tinogona kuipedza mumazuva gumi nemashanu.
Neruzivo kubva muna 2001, Asiaprint ine makore gumi ekuva mutungamiri weindasitiri mukugadzira nekutengesa zvakasiyana zveMuchina Wekutamisa Machina, T Shirt Printing Machines, Hot Stamping Machines, Eco-solvent maprinta, Dye Sublimation Printa, zvichingodaro.
Kune akasiyana akasiyana madhipatimendi, akadai sainjiniya dhipatimendi, iri kusimukira dhipatimendi, ekisipoti dhipatimendi, mushure-rekutengesa dhipatimendi, QC department, ect. Dhipatimendi rega roga rakazvipira kupa vatengi neakanakisa sevhisi uye yakavimbika mhando michina. Isu takanangana nekugadzira nyowani yekushandisa-yakavakirwa uye yevatengi-yakatarisana nemikana bhizinesi mikana, kunyanya kudhinda & kupisa Press mhinduro.
Ruzivo rwedu rwakasiyana sehuwandu hwezvigadzirwa zvatinopa nhasi, uye tinodada nekuve takashanda nevamwe veanotungamira masangano ekusimudzira, akadai seUSA, Mexico, Thailand, Serbia, Vietnam zvichingodaro.
Asiaprint inovimbisa kuti kugutsikana kwako ndiko kuchave kutsvaga kwedu, uye isu tinokupa iwe sevhisi yepamusoro kuburikidza nehunyanzvi hwehunyanzvi uye yekutanga-kirasi michina. Asiaprint inotarisira kumisikidza hurefu-hwakareba, hwakagadzikana, uye hwechokwadi kudyidzana hukama neshamwari dzedenderedzwa dzese.
Pashure: Mucheka Roller Heat Press Machine
Zvadaro: 1.7m Hupamhi Kendendende Fabric Heat Transfer Transfer Machine
Dhijitari Inodhinda Upfu Pet Kutamisa Firimu DTF ...